Weather in Thailand in September ~ Journey-Assist - Vanim-potoana. Humidity. Aiza no haleha
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand amin'ny volana septambra
Weather in Thailand amin'ny volana septambra
Ny fiakaran'ny vanin-taona mafana dia mitohy amin'ny fiandohan'ny fararano. Ankoatr'izay, ny tsy fiatoan'ny monsoon avy any Thailandy dia mitarika fa ny any amin'ny faritra samy hafa miaraka amin'ny habetsahan'ny orana dia hafa tanteraka amin'ny lafiny hafa rehetra. Ohatra, mafana ny volana septambra any avaratry ny firenena sy any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Fanjakan'i Thailand, raha ny renivohitra kosa dia orana isan'andro.
Ny fiandohan'ny fararano dia be mpitia amin'ireo mpitia onja avo sy mikoriana, satria izany dia vonona handresy kilometatra an'arivony maro izy ireo mandritra ny ora maro hiandrasana ny andro azo ekena sy ny onjan'izy ireo. Ny mpizahatany izay mankafy fialantsasatra amoron-tsiraka milamina, azo inoana fa tsy ho faly amin'ny toetrandro amin'ny firenena ny volana septambra.
Ny toetr'andro amin'ny volana septambra
Ny orana kely indrindra amin'ny fiandohan'ny fararano dia tsikaritra any amin'ny faritany avaratry ny firenena sy amin'i Samui. Manodidina ny +31 degre ny mari-pana amin'ny andro any Chiang Mai; amin'ny alina, mahatratra +24 degre ny hatsiaka. Ny isan'ny orana any Chiang Mai dia eo amin'ny 4 eo ho eo, ary any Chiang Rai - 12. Miaraka amin'izany, mihamitombo ny firotsahan'ny orana any atsimo-andrefan'ny firenena.
Efa ho iray volana izay, hotsahatra amin'ny orana mivatravatra ny vahiny ao Bangkok sy ny manodidina, satria ny orana kely indrindra 330 milimetatra ao anatin'ny iray volana. Tsy mihoatra ny +28 degre ny mari-pana isan'andro eo an-tanàna, fa miaraka amin'ny hatsiaka, ny hamandoana mahavariana dia tonga eny an-dalambe, izay matetika mitovy amin'ny 100%. Amin'ny toe-javatra toy izany, mazava ho azy, dia tsy afaka mijanona amin'ny fitsaharana feno ianao fa ny tsirairay kosa dia hanana fahatsapana manokana avy amin'ny renivohitra. Ny metropolis goavana mandritra ny oram-be mivatravatra dia mahazo fihetseham-po manokana izay azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny fandehanana eny amin'ny lalambe mando fotsiny, midoboka ny ranon'ny rano avy eny ambony tafo ary mitsambikina amin'ny dobo lava be. Tany Pattaya, avy be ny orana, amin'ny volana septambra, na dia mafana aza ny ranomasina, manodidina ny +29 degre, nefa saika tafio-drivotra foana. Tsy azo atao ny milomano, tsy ho an'ny ankizy ihany, fa ho an'ny olon-dehibe koa.
Soa ihany, tamin'ny volana septambra i Thailand dia manana zoro izay ahafahanao miala amin'ny orana sy ny hamandoana tsy tapaka. Ity dia Koh Samui sy ny nosy rehetra izay eo akaiky eo. Mazava ho azy fa tsy tokony hiantehitra amin'ny toetr'andro lavorary miaraka amin'ny masoandro ao amin'ny faravodilanitra mandritra ny iray volana ianao, fa afaka mieritreritra orana kely ihany koa ianao. Ny tolakandro, miakatra +32 degre ny thermometer. Ny ranomasina dia tsy azo antsoina hoe milamina, fa amin'ny bara mihidy dia hivadika ho vidy izany, indrindra satria mafana ny rano, manomboka amin'ny +28 ka hatramin'ny +30 degre.
Any amin'ny morontsiraka Andaman, ny toetr'andro dia tsy afaka mirehareha amin'ny toe-javatra tsara amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina. Ny hany zavatra ahazoana aina ho an'ny mpizahatany dia ny mari-pana ambany, fa amin'ny +28 degre tolakandro. Raha tsy izany, ny fandaminana ny fialantsasatra amoron-dranomasina mahazatra ho an'ny rehetra ary manomana ny fitsangatsanganana fitsangantsanganana noho ny orana tsy tapaka dia sarotra be ary matetika tsy ho vita mihitsy.
Endrika fitsaharana amin'ny volana septambra
Tamin'ny fiandohan'ny fararano tany Thailand dia afaka mitory fifaninanana exotic ho an'ny ankamaroan'ny mpizaha tany ianao: amin'ny antenatenam-bolana dia atao any amin'ny faritr'i Hua Hin ny Royal Elephant Polo Cup. Ity fanatanjahantena ity dia iray amin'ireo maoderina indrindra amin'ny planeta, fa efa nahavita nahita ireo mpankafy azy teto amin'ny firenena sy lavitra ny sisiny.
Aiza ianao no miala sasatra any Thailandy amin'ny volana septambra?
15 andro (222.2 mm.)
17 andro (321.8 mm.)
12 andro (174.9 mm.)
12 andro (225.2 mm.)
17 andro (322.2 mm.)
17 andro (322.3 mm.)
14 andro (181.4 mm.)
15 andro (342.8 mm.)
17 andro (322.7 mm.)
17 andro (322.8 mm.)
21 andro (547.0 mm.)
15 andro (321.8 mm.)
13 andro (223.2 mm.)
15 andro (320.8 mm.)
15 andro (274.5 mm.)
21 andro (547.5 mm.)
18 andro (347.6 mm.)
11 andro (142.1 mm.)
21 andro (515.7 mm.)
16 andro (241.1 mm.)
9 andro (123.7 mm.)
9 andro (122.2 mm.)
18 andro (322.0 mm.)
17 andro (323.9 mm.)
17 andro (324.8 mm.)
18 andro (322.1 mm.)
12 andro (130.4 mm.)
10 andro (135.3 mm.)
18 andro (323.6 mm.)
13 andro (226.0 mm.)
9 andro (129.4 mm.)
11 andro (156.6 mm.)
11 andro (144.8 mm.)
17 andro (333.3 mm.)
17 andro (321.0 mm.)
18 andro (324.5 mm.)
17 andro (298.2 mm.)
9 andro (119.9 mm.)
15 andro (336.8 mm.)
11 andro (151.9 mm.)
17 andro (194.3 mm.)
17 andro (324.2 mm.)
21 andro (514.4 mm.)
11 andro (179.8 mm.)
14 andro (219.2 mm.)
14 andro (223.1 mm.)
3 andro (64.0 mm.)
13 andro (174.5 mm.)
9 andro (126.5 mm.)
13 andro (166.1 mm.)